एटिएमबाट चोरी भएको रकम असुलीमा राष्ट्र बैंक र प्रहरी किन मौन ? - Everest Dainik - News from Nepal
याे पनि पढ्नुस ठूला बैंकलाई विशेष नियमन
ह्याकरले भारतबाट चोरी गरेको रकम असुलीबारे केही प्रक्रिया अगाडि नबढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रहरीले पनि यसबारे सोधखोज गरेको छैन । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस प्रेस कार्ड देखाएर चोरी !
ट्याग्स: एटिएम, चोरी, प्रहरी, राष्ट्र बैंक